Tungsten Carbide Corrugated Roller China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:မြင့်မားသောတိကျသောမြှောင်းပုံကြိတ်စက်,Corrugating Machine အတွက် Corrugating Roll,လူပျို Facer မြှောင်းပုံ Roller
Home > ထုတ်ကုန်များ > Corrugating Rolls > Tungsten Carbide Corrugated Roller
တစ်ခုတည်းသော Facer စက်၏ Tungsten Carbide Corrugated Rollers များသည် အလွန်အမင်းအကျိုးရှိပြီးအလိုအလျှောက် Corrugation Machine Lines ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်တိကျသောကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်ကိုဘော့အဖြိုက်နက်ပြုလုပ်ခြင်းသည် roller များ၏သက်တမ်းကိုတိုးတက်စေပြီးထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်တွင်စီးပွားရေးအရအလားအလာရှိသည်။
Corrugator Belt: Synthetic Corrugator Belts / မြန်နှုန်းမြင့် Corrugator ခါးပတ်များ / အားဖြည့် Edge လဲမှို့ခါများ / ချည် Canvas သယ်ဆောင်ခါးပတ်
တစ်ယောက်တည်း Facer: Cassette တစ်ယောက်တည်း Facer / Fingerless တစ်ခုတည်း Facer
Tungsten Carbide တစ်ခုတည်း Facer မြှောင်းပုံ roller အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
1.Material: အထူး 48CrMo အလွိုင်းသံမဏိဒဏ်ငွေအတု
2.Hardness:> HRC58 အလွှာမီးငြိမ်းသတ်ခြင်း - ၅-၇ မီလီမီတာ
3.coating အထူ 0.06 နှင့် 0.07mm Tungsten Coating အထူ
5.Combination Hardness> 75MPa
6. မြင်နိုင်သော optical porosity <1%
စီးပွားရေးအမျိုးအစားဒီဇိုင်း၏ 7.The optimization
၈။ အရှိန်မြှင့်သောသုတ်လိပ်များ - နှစ်ကြိမ်ကြိတ်ခွဲခြင်း
to သွား၏အမြင့်ကန့်သတ်ချက် - ၀.၀၂ မီလီမီတာ
to သွားအထူ၏ ၀.၀၁၅ မီလီမီတာကိုကန့်သတ်ပါ
to သွားပရိုဖိုင်းကို ၀.၀၂၂ မီလီမီတာကန့်သတ်ပါ
top သွားထိပ်တန်း ၀.၀၂၅mm
the သွားမျက်နှာ၏တန်းတူညီမျှမှု၏အကန့်အသတ်သွေဖည်မှု - ၀.၀၂ မီလီမီတာ
ough Roughness Ra .40.4μm
to သွား၏အကန့်အသတ်သွေဖည်± 20″
middle အလယ်အလတ်နှင့်အမြင့် roller တို့၏အမြင့်ကန့်သတ်ချက်±± 5%
Tungsten Carbide Corrugated Rollers ပို့ဆောင်ခြင်း -
fumigation မဟုတ်သောသစ်သားသေတ္တာကိုသုံးပါ၊ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရန်အဆင်ပြေပါသည်။ သုံးစွဲသူများကိုအချိန်ပိုမိုသက်သာစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစု ၀ င်ဖြစ်သည်ဟုထင်လို။ ၎င်းတို့အားစိတ်ရင်းမှန်နှင့်သူတို့ခံထိုက်သောဂရုပြုမှုဖြင့်သူတို့ကိုဂရုစိုက်သည်။
သင့်တင့်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးနှုန်းသင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရှာရန် HUATAO ကသင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုစျေးသက်သာ။ လေယာဉ်ဖြင့်လုံခြုံမှုဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ပါ။ သွင်းကုန်အခွန်လျှော့ချရေးအတွက်ဖောက်သည်များအတွက် [မူရင်း၊ လက်မှတ် [FORM E "၊ [FORM A" နှင့် [FTA] တို့ကိုအခြားတောင်းဆိုမှုများအဖြစ်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေရန်လည်းသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ လိုအပ်ပါကတရုတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးပါ။ HUATAO = သင်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။ တရုတ်နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
3. 24 နာရီဝန်ဆောင်မှု
HUATAO သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားထိရောက်သောအကူအညီများပေးရန်အထူးဌာနကိုထူထောင်သည်။ ၂၄ နာရီအတွင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : Corrugating Rolls
Corrugation အတွက် Chrome Plated Rollers အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hard Chrome Corrugated Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tungsten Carbide Corrugated Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
48CrMo Tungsten Carbide Corrugated Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chrome Plated သို့မဟုတ် Tungsten Carbide Corrugated Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chrome Plated Corrugated Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စိတ်ကြိုက် Fosber BHS ကတ်ထူပြားသွပ်သွင်းစက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူပျို facer A / B / C / D / E ပုလွေသွပ်သွင်းစက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက္ကူစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စက္ကူစက် Head Head ကို
စက္ကူစက်ရုံအတွက် Flu Suction Box
ဖိအားမျက်နှာပြင် slot က Basket
Pulley Belt Driven Pulp Chest Mixer လှုပ်ရှားမှု
မြင့်မားသောတိကျသောမြှောင်းပုံကြိတ်စက် Corrugating Machine အတွက် Corrugating Roll လူပျို Facer မြှောင်းပုံ Roller မြင့်မားသောတိကျသောမြှောင်းပုံလိပ် မြင့်မားသောတိကျသောမြှောင်းပုံပြုလုပ်ခြင်း မြင့်မားသောအပူချိန်အပူခံနိုင်ရည်အပေါ်ကြိတ်စက် မြင့်မားသောတသမတ်တည်းသန့်ရှင်းရေးစက္ကူစက် မြင့်မားသောရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု